Translate Hebrew to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Hebrew to Myanmar (Burmese), Hebrew to Myanmar (Burmese) translations, Hebrew to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
שלום מה שלומך မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
האם יש מישהו? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
אני אוהבת אותך כל כך ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
כמה עולה המבורגר הזה? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
אתה יכול לקרוא לי מונית? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
אני מצטער ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
סלח לי တဆိတ်လောက်
אני מעוניין ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
הטיסה שלי התעכבה အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
אני כאן לעסקים ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
שלום שמי הוא မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
אני מצטער, אבל אני נשוי ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
הייתי רוצה לשאול אותך ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
אתה יכול לקחת אותי לשדה התעופה? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
מה השעה עכשיו, בבקשה? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
איפה תחנת המשטרה הקרובה? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
האם אני יכול לשאול את מטען הטלפון שלך בבקשה? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
אתה יכול לעזור לי? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
להזמין לי משקה, בבקשה? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
כמה זה עולה? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
אני אלרגי לגלוטן ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
התקשר לרופא ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
האם יש רופא? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
האם אני יכול לקבל שיחת טלפון? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
תקרא לי הבוס שלך בבקשה. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
המקום הזה נחמד מאוד ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
קח אותי למלון בבקשה ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
מהו מספר החדר שלי? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?